नयाँ शक्ति निर्माण अभियान नेपाल | कुमार क्षेत्री, केन्द्रीय सदस्य तथा झापा संयोजक – के हो नयाँ शक्ति निर्माण अभियान ?
– एकीकृत नेकपा माओवादीको त्यति ठूलो संगठन थियो र त केही गर्न सकेन । तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? – के–के गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । माओवादी जुन ठाउँमा आइपुग्यो त्यसको नेतृत्व हाम्रो सहयोगमा प्रचण्डले गर्नुभयो । त्यो चरणबाट आर्थिक क्रान्तिको चरणमा पार्टीलाई प्रवेश गराउनुपर्ने थियो । प्रचण्डले सक्नुभएन । डा. बाबुराम भट्टराईले युद्धकालीन संरचनामै पार्टी गयो, यसलाई पुनः गठन गरौँ भन्नुभयो । राजनीतिक सत्ता ध्वस्त पार्ने शक्तिलाई नवनिर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्ने भट्टराईको माग थियो । युद्धकालीन संगठनलाई निर्माण र सिर्जनामा लैजान प्रचण्डले अवरोध गर्नुभयो । विकासका कार्य गर्न सक्ने ठूलो शक्ति बाहिर थियो । त्यसलाई समेटौँ भन्ने भट्टराईको प्रस्ताव प्रचण्डले नमानेपछि नयाँ शक्ति बनाउनुपरेको हो । जलस्रोतको विकास, कृषि क्रान्तिजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस गरेर माओवादीलाई रिफाइन गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । अब नयाँ शक्तिले गर्छ ।